XOG:- Hal arin uu fahad yaasiin u ogolaaday shiiq shariif iyo hasan shiiq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu 16 November 2019
Fahad Yaasiin ayaa Mucaaradka u ogolaaday in ay dhigtaan banaanbaxyo sida aan ku helay xog lagu kalsoonaan karo.
Dhammaan saraakiisha Ciidanka ayuu Fahad ku amray in aysan faragalin karin banaan baxa Mucaaradka, waraasina waa nuqul kamid ah dalabkii shariif Shiikh Axmed sida aan warka ku helnay.
Meelaha la filayo in banaanbaxyadu ay ka dhacaan waa Kaaraan ilaa degmada Hodan inta u dhaxaysa waxaana banaanbaxayaashu sameyn doonaan in Kaaraan illaa Hodan ay isqabsadaan.
Wax yaabaha Fahad ka dooday waxaa kamid ahaa sida uu banaanbaxa uu u saameyn karo Madaxtooyadda, waxaana dhankiisa loo ballan qaaday in gudaha madaxtooyada aysana galeyn Banaanbaxyadaas.
Madaxweyna yashii hore shiiq shariif iyo xasan shiiq ayaa caadis ku saaraya dowlada federalka in ay dadka muqdisho kadeeyso caadiska iyo caburinta waxaan ala ogeen waxa xigi doona banaanbaxan waa hadii uu dhacee.
LAYAAB:-Xilka qaadista Donal Trump oo lugaha la gashay Soomaaliya!